Pandago | foodpanda riders MM
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Panda Riderများ နေ့စဉ်ဝင်ငွေတိုးစေဖို့ဟာ အဓိကဦးစားပေးအချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အော်ဒါများပိုမိုရရှိဖို့အတွက် အစဉ်အမြဲကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Panda Rider တို့အတွက် နေ့စဉ်ဝင်ငွေတိုးစေမယ့် pandago ဆိုတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအသစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
လက်ရှိမိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင်ရှင်များအပြင် အစားအသောက်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ချင်သူအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပို့ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ယခင်ထက်အော်ဒါများပိုမိုလက်ခံနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူ Customer တွေရဲ့ အော်ဒါတွေကို မိမိဇုန်အတွင်းမှာလက်ခံပြီး ၎င်းဇုန်အတွင်းမှာဘဲ
ပို့ဆောင်ပေးရမယ့်အော်ဒါများရှိသလို အခြားဇုန်ကို ပို့ဆောင်ပေးရမယ့် အော်ဒါများရှိနိုင်ပါတယ်။ ဇုန်ကျော်ပို့ဆောင်ရေး (Cross-Zone Delivery) လို့ဆိုပါတယ်။
pandago (သို့) ဇုန်ကျော်ပို့ဆောင်ရေး(Cross-Zone Delivery) မှာ
ဝေးဝေးပို့ဆောင်လေ များများပိုရလေ ဖြစ်ပါတယ်။
အော်ဒါလက်ခံချိန်ကစပြီး အော်ဒါကို ပို့ဆောင်ပေးရမည့်နေရာသို့ရောက်ရှိအောင် ပို့ဆောင်ပြီးချိန်အထိလုပ်ဆောင့်ရမယ့်အဆင့်တွေက ပုံမှန်လက်ခံပို့ဆောင်နေကျ အော်ဒါများအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ပို့ဆောင်နေကျရတဲ့အော်ဒါတွေနဲ့ pandago အော်ဒါတွေမှာ မတူကွဲပြားနေတာတစ်ခုက အော်ဒါကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ pandago အော်ဒါတွေရဲ့ Code က xxxx-yyyyyy ဆိုပြီး စုစုပေါင်းကုဒ်(၁၀)လုံး ပါဝင်ပါတယ်။​
pandago (သို့) ဇုန်ကျော်ပို့ဆောင်ရေး (Croos-Zone Delivery) ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
မိမိဇုန်အတွင်းမှ အော်ဒါကိုလက်ခံပြီး အခြားဇုန်တစ်ခုအတွင်း ပို့ဆောင်ခြင်းကို ဇုန်ကျော်ပို့ဆောင်ရေး (Cross-Zone Delivery) လို့ခေါ်ပါတယ်။ သို့သော် အခြားဇုန်မှမှာယူတဲ့ အော်ဒါများကိုတော့ လက်ခံပို့ဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဇုန်ကျော်ပို့ဆောင်ရတဲ့အခါ ဇုန်ပြင်ပသို့ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် အနား(Break)ပေးခံရနိုင်လား?
မခံရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဇုန်အပြင်သို့ သွားရောက်အော်ဒါပို့ဆောင်ပြီးသည့်အခါ နောက်ထပ်ဝင်လာမယ့် အော်ဒါအသစ်များ ဆက်လက်လက်ခံပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိရဲ့သတ်မှတ်ဇုန်အတွင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိနေရပါမယ်။
​ဇုန်အပြင်တွင် အော်ဒါပို့ဆောင်အပြီး မိမိရဲ့ဇုန်အတွင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရမည့် အချိန်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသလား? သတ်မှတ်ချက်ရှိပါက အချိန်မည်မျှရရှိပါသလဲ?
ရှိပါတယ်။ အော်ဒါပို့ဆောင်ပြီးစီးပါက မိမိရဲ့ဇုန်အတွင်းပြန်လာရန် အများဆုံးအချိန်(၂)နာရီ ရရှိမှာပါ။
​ဇုန်ကျော်ပို့ဆောင်ရတဲ့ အော်ဒါတွေအတွက် လုပ်အားခပိုရမှာလား?
ရရှိပါမယ်။ ဝေးဝေးပို့ဆောင်လေ များများပိုရလေဖြစ်ပါတယ်။ အော်ဒါမပို့ဆောင်ခင် အော်ဒါအတွက်ရရှိမယ့် ဝန်ဆောင်ခအကြောင်းကိုတော့ ယခုလင့်ခ် ကတဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
pandago အော်ဒါအား လက်ခံပို့ဆောင်ရန်ငြင်းဆိုပါက ကျွန်တော်/ကျွန်မရဲ့ အော်ဒါလက်ခံနှုန်း (Acceptance rate) ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား?
ပုံမှန်အော်ဒါများအတိုင်း လက်ခံပို့ဆောင်ရန် ငြင်းဆိုပါက အော်ဒါလက်ခံမှုနှုန်း (Acceptance rate)ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။